Archive du 20190808
James Ratsima “Tsy misy zavatra antenaina amin’izao fitondrana izao”
Tsy dia hita taratra loatra ny tena asa mivaingana ataon’izao fitondrana izao.
Dr Joseph Randriamiandrisoa Mitavozavoza sy tsy vonona ny fitondrana
Midika ho tsy fahavononan’ny fanjakana amin’ny fifidianana ny fanemorana.
Marc Ravalomanana Hailika tsy ho lehiben’ny mpanohitra…
Miisa 2 ireo lalàna momba ny satan’ny mpanohitra hodinihina eny amin’ny antenimieram-pirenena mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny 12 aogositra izao.
Fitakiana ny “îles Eparses” Hatsangana indray ilay Komity fakan-kevitra
Hijoro fanindroany ny Komity manokana misahana ny fakan-kevitra manodidina ny fameranana ireo Nosy Malagasy, satria efa nisy komity voalohany tamin’ny fitondrana Rajaonarimampianina.
Fihemoran’ny datim-pifidianana Misy fiantraikany amin’ny fitantanam-bolan’ny kandida
Manao antso avo foana aho, hoy ny kandida ho ben’ny tanàna ao Farafangana, Falison Jocelin Rantenaina, alefaso amin’ity taona ity ny fifidianana !
Lalaon’ny nosy 2019 Nakotroka ny fitsenan’i Toamasina an’ireo Maherifo avy any aminy
Nakotroka dia nakotroka tokoa ny nandraisan’ny vahoakan’i Toamasina an’ireo Maherifo avy any amin’iny Faritra Atsinanana iny izay nandray anjara tamin’ny lalaon’ny nosy 2019 farany teo tany Maorisy.
Tetikasa Fihariana Mba ho lavitry ny kolikoly sy kinamanamana…
Hitsidika ireo faritra manerana ny nosy ny filoha Rajoelina manomboka ny herinandro ambony hifampiresaka amin`ireo tanora hanatanterahana ny tetikasa Fihariana.
Fahantran’ny Malagasy Ireo nosy eparsa no vahaolana, hoy ny ANM
Nanao antsoavo ho an’ny fikambanana rehetra miady amin’ny hiverenan’ireo nosy manodidina na nosy Eparsa amin’ny Malagasy omaly ny avy eo anivon’ny fikambanana nosy
Aretina mamany lava Vehivavy maherin’ny 50 no hiatrika fandidiana
Natomboka tamin’ny alatsinainy lasa teo ny hetsika hitsaboana ny aretina “mamany lava” any Ambovombe Androy ary hitohy mandritra ity volana aogositra ity.
Fananganana pylone ao Bemasaondro Itaosy Naaton’ny Ben’ny tanàna aloha
Tapitra omaly ny herinandro, fe-potoana nomen-dRakotomandimby Jean, Ben’ny tanànan’ny kaominina ambanivohitra Bemasoandro Itaosy mikasika ny fanapahan-keviny momba ilay fananganana pylone
Mama françoise mpitaiza kamboty eny Ankadilalana Nindaosin’ny fahafatesana, namela kamboty marobe
Nindaosin’ny fahafatesana koa i Mama Françoise ilay renim-pianakaviana be fitiavana mpanao asa soa mitsinjo ireo mahantra sy kamboty eny Ankadilalana sy Mahamasina.
Farafangana Nifampitadiavana ny solika fandrehitra
Sahirana tanteraka tamin’ny fitadiavana solika fandrehitra na ny « pétrole » ny mponina tao amin’ny distrikan’i Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana.